Faahfaahin:Gaadiid Dagaal Oo Shariif Sakiin Laga Qabsaday. – Bogga Calamada.com
Faahfaahin:Gaadiid Dagaal Oo Shariif Sakiin Laga Qabsaday.
Wararka ka imaanaya degmada Baydhabo ee xarunta gobalka Baay waxey sheegayaan in duleedka degmadaasi uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Shabaabul Mujaahidiin iyo maleeshiyaatka maamulka gaala raaca Shariif Sakiin.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada Shabaabul Mujaahidiin weerar dhabba gal ah u dhigeen kolanyo ka baxday degmada Baydhabo kuwaasi oo kusii jeeday deegaanka Goof-gaduud Shabeelow oo saaka dagaal ay kula wareegeen ciidamada Shabaabul Mujaahidiin.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa xaqiijinaya in dagaalka ka dhacay duleedka degmada Baydhabo khasaara lagu gaarsiiyay maleeshiyaatka Murtad Shariif Sakiin.
Inta la xaqiijiyay hal gaari oo Cabdi Bile ah ayaa laga gubay maleeshiyaatka Shariif Sakiin waxaana laga qabsaday labo gaari oo Cabdi Bile ah kuwaasi oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada Shabaabul Mujaahidiin.
Sidoo kale wararka laga helayo Baydhabo ayaa sheegaya in dagaalkaasi dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen tiro ka tirsan maleeshiyaatka Shariif Sakiin’ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya ee ku sugan degmada Baydhabo wax gurmad ah uma sameyn maleeshiyaatka lagu galay duleedka degmadaasi.
Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ayaa saaka dagaal kula wareegay deeegaanka Goof-gaduud Shabeelow oo ka mid ah deegaanada dhaca duleedka degmada Baydhabo.